”Dal & dad waliba wuxuu helaa dowladda uu u qalmo!” | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka ”Dal & dad waliba wuxuu helaa dowladda uu u qalmo!”
(Hadalsame) 25 Sebt 2020 – Inay muwaaddiniinta helaan xaqa codbixinta waa hannaanka ugu wanaagsan, oo ay kaga qayb geli karaan talada dalka. In laga hor-istaago xuquuqda codbixinta waxay abuurtaa nidaam kaligii-talis ah. Abwaan Maxamed Ibrahim Warsame Hadraawi ayaa yiri “inagaa abuurna keligii-taliska, marka aynu samayno, qalabayno, oo aynu hubayno kaddib, markii uu wax gumaado, ayaynu hadhowto calaacalnaa!”
Nasiibdarro, heshiiska ay wadaggaleen hoggaanka fulinta heer federal iyo goboleedba, waxuu meesha ka saarayaa xaqa codbixinta muwaaddiniinta waxuu awood xad-dhaaf ah siinayaa Madaxda Maamul-Goboleedyada! Taasoo si dadban u dhiiriggelinaya musuq iyo nin-tooxsi.
Xornimada kaddib, taariikhda waxay ina baraysaa in shacabka Soomaaliyeed waligiis uu afduubnaa shakhsiyaad danleey siyaasadeed ah, kuwaas oo mar walba u jiheeya jiho aysan nolol iyo cadaalad ka jirin.
Waxaa Qoray: Siciid Cabdisalaan
Previous articleKenya oo fadeexad dhex fadhida & dalalka deeqda bixiya oo ku dheggan
Next articleDAAWO: Tareen moodal cusub ah oo ay Gothenburg yeelanayso oo la mariyey tijaabadii ugu dambaysey & waxa ku cusub